Izindaba - Kumenyezelwe uhlu lwabakhiqizi beqoqo lesithathu lezinto ezisemqoka zokuvimbela nokulawula ubhubhane
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule
Akungabazeki ukuthi isomiso eside sihlangana namazolo amnandi
"Izinsizakalo ezintathu" ezinhle kakhulu
Umshini wokuthunga we-Max Co., Ltd.
Imenenja jikelele uMao Xiaoyong
Kusesikhathini kakhulu. Ngiyalazisa impela iKomidi Lesifunda laseJiaojiang kanye nohulumeni. Ngalesi ziqu, kuhle kuzo zonke izici zenkampani. Ukukhululwa kwentela, inzalo ekhethekile yasebhange, kanye nokuthengwa kwemishini kuvule isiteshi esiluhlaza.
Ngaphansi kwesimo esiwumqedazwe
Yiba nomshini wokuthunga ongenza izingubo zokuzivikela
Kufana nokuba nesikhukhukazi esizalela iqanda legolide
Nezinkampani ezenza izinkukhu
Akungabazeki ukuthi ikhekhe limnandi
Ntambama ngoMashi 26, intatheli yaya emanks wokuthunga imishini Co, Ltd., etholakala kuHongjia Street okokuqala ngqa. Ku-workshop enkulu yemishini, abasebenzi basesezingeni lokugcina lokulungisa inqwaba yemishini yokuthunga. Iloli elincane lomenzi elivela eHaining selilinde isikhathi eside. Ngenxa yokwesaba "ukungakwazi ukuthatha" izimpahla, abakhiqizi bakhetha "ukucwenga" ngqo emnyango wenkampani ukuqinisekisa ukuthi umshini wokuthunga osanda kukhiqizwa uyalayishwa futhi uhanjiswe ngokushesha okukhulu.
UMao Xiaoyong, umphathi jikelele weManx wokuthunga umshini Co., Ltd., “ba-ode amasethi angama-60, kodwa asikwazanga ukuwahambisa. Bekufanele siwathumele amasethi ayi-15 kuqala, futhi sibanikeze nohlobo olulodwa kuphela. Masixazulule izidingo zabo eziphuthumayo kuqala. ”
Kwenzakalani? Masazi inkampani kusukela ekuqaleni
Yaqalwa ngo-2007, kuyinto ezikhethekile imishini yokuthunga imishini kanye izesekeli amabhizinisi ukukhiqizwa. Le nkampani manje ikhiqiza kakhulu umshini wokusika ibhande, umshini omkhulu obopha inkinobho emhlophe, umshini wokuhlukanisa, umshini wokugqobhoza indwangu, i-boiler, umshini wokunamathela, umshini wokusika ummese oyindilinga nezinsiza zomshini wokuthunga, izingxenye neminye imishini yomshini wokuthunga, ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukukhiqizwa, isevisi yokuhlola neyokuthengisa ngemuva ebhizinisini elilodwa.
Umshini wokuthunga wokwenza izingubo zokuzivikela eziqeqeshiwe
"Alikho ithemba lokuthengisa, lo mshini mncane kakhulu"
Ekuqaleni kukaDisemba 2019, ama-manks athuthukisa umshini wokufaka uphawu lomoya oshisayo ongenza izingubo zokuzivikela zokwelashwa. Ngaleso sikhathi, uMao Xiaoyong noyise babengenathemba kakhulu ngemakethe yayo. "Kwakukhona uhlobo olulodwa kuphela ngesikhathi lusakhiwa, futhi alukaze lwenziwe nakancane," kusho uMao. Inhloso enkulu yokwenza lo mkhiqizo ukunothisa imikhiqizo yenkampani. Angilithembi impela ivolumu yokuthengisa kwayo. Ngemuva kwakho konke, imisebenzi yayo mincane kakhulu. ”
Manje, uma isikhathi sibuyela emuva kulowo Disemba, uMao Xiaoyong washo ngokumomotheka ukuthi inkampani yonke kufanele ukuthi yamisa ibhodi lombhede futhi yaqala ukukhiqiza lo mshini wokuthunga.
Ama-oda amakhulu we-2000 avela kumabhizinisi aphakathi
Kepha ibhizinisi alizange lilinge ukwamukela
“Unesivikelo somoya esishisayo angithi?”
“Sifuna amayunithi angama-2000. Unamalini? Ungakhokha i-oda manje. Kuyaphuthuma! ”
NgoFebhuwari 10, uMao Xiaoyong wathola ucingo lwe-oda oluvela ebhizinisini eliphakathi. Ubhadane lwaqubuka ngendlela ezungeza yonke indawo. Izingubo zokuzivikela zangaphambili zazisesimweni esiphuthumayo esibi. Elinye iqembu liqonde ngqo endaweni lashaya i-oda elikhulu lamayunithi angama-2000. Wamangala kakhulu ukuthi uMao Xiaoyong akazange alokothe ​​aphendule ucingo khona lapho.
“NgoFebhuwari, babengekho abasebenzi kule nkampani, futhi izingxenye bezingakaqali ukukhiqiza. Ungasho ukuthi u-2000, sinobunzima nabangama-20. ”UMao Xiaoyong umamatheka kamunyu. Ngabe "inyama enonile" ilethwa emnyango kanjena? UMao Xiaoyong wayengathandi. “Uhlu olukhulu kangaka lungasuswa kanjani? Angizange ngiyinqabe ngqo. Ngizamile nangezindlela eziningi, njengokuzama ukubambisana namanye amabhizinisi ukukhiqiza ndawonye, ​​noma ukuthenga izingxenye ngqo, futhi ngisheshise umhlangano kuqala… “NgoFebhuwari ka” izinxushunxushu zempi “, wonke amabhizinisi abematasa kakhulu, neMao Indlela kaXiaoyong yehluleke ngokwemvelo. Ekugcineni, i-oda lamayunithi angama-2000 bekufanele linqatshwe
Ucingo lokubonisana selukhishiwe
Umshini wokufaka uphawu lomoya oshisayo
Isidingo somhlaba wonke sidlula ukunikezwa
Ngemuva kwalokho, kusuka eShanghai, eHangzhou, eHaining, eShandong… Kuzo zonke izinombolo ezidayiswayo zezwe, bonke abakhiqizi bemodeli eyodwa babumbene kakhulu: umshini wokuvala umoya oshisayo.
"Ngivame ukuthola izingcingo ezingaphezu kwezingu-20 ngosuku." UMao Xiaoyong utshele abezindaba ukuthi lesi simo esikhona njengamanje sobhadane lwasekhaya siyancishiswa, kodwa kusenemiyalo eminingi. Ngokuqhamuka kwesifo esiwumshayabhuqe phesheya, ama-imeyili avela eCanada, Turkey, Middle East, South America, Asia Pacific nakwamanye amazwe nawo agcwalise ibhokisi leposi lenkampani. Umshini wokufaka uphawu lomoya oshisayo uyashoda emhlabeni.
(umshini wokufaka umoya oshisayo)
Lapho amabhizinisi esenkingeni, uhulumeni kufanele enze konke okusemandleni awo ukuwasiza
Yibuphi ubunzima ekuvimbeleni nasekulawuleni ubhadane lwamabhizinisi? Yini ukumelana nokubuyela emsebenzini ngokuphephile? UJiaojiang ubambelela “emisebenzini emithathu” ekuvimbeleni nasekulawuleni ibhizinisi, ubunzima bokukhiqiza ukuphepha, ukuxazulula inkinga.
“NgoFebhuwari, sisize abesilisa ukuthi babuyele emsebenzini nasekukhiqizeni, sihambise izinto zokwelapha eziwubhadane, sabasiza ukuthi babe nezindlela ezifanele zokuvimbela ubhubhane, benze isayensi ibulewe futhi babulale nolwazi. NgoMashi, bazi ukuthi abakwazi ukuhambisana nejubane lokukhiqizwa kwezingxenye, basebenze nomgwaqo ukusiza ukuxhumana nabanye abakhiqizi, futhi baqale bathenga izingxenye ezizothatha indawo yokukhiqiza kwabo, ukuze bakhuphule umkhiqizo kuqala. ”UZhang Linghui, onguchwepheshe kwezamabhizinisi, utshele izintatheli ukuthi yize ebesebenza kanzima ukuze" agijime ", lezi zinyathelo zimane nje ziyibhakede, futhi ukukhiqiza okuyinhloko kwebhizinisi kube nzima ukusheshisa.
Kuze kube yilapho ebona izindaba zokuthi iSifundazwe saseZhejiang sikhiphe ibhizinisi eliyisiqinisekiso esiyinhloko sokuvikela nokulawula ubhadane, uZhang Linghui waqonda ukuthi leli kwakuyithuba lamanothi. Ngakho-ke, wabiza ngokushesha abasebenzi baseHongjia Street ukuba "basize" futhi waya ekuthuthukisweni kwesifunda naseReform Bureau. Qonda izimo zokufaka isicelo, wethule isimo sebhizinisi ngokuningiliziwe, phokophela i-quota ye-max, futhi unikeze isiqinisekiso sokukhiqiza esiqinile sebhizinisi ngezinsizakalo ezintathu ezinamandla kakhulu, ezifika ngesikhathi futhi ezifudumele.
Umuntu ofanele ophethe ukuthuthukiswa kwesifunda kanye neReform Bureau uthe: “kungumsebenzi wethu ukweseka ngokuphelele nokukhuthaza intuthuko engcono yamabhizinisi. Lapho sazi ngesimo sama-manks, sayibika ngokushesha futhi sabeka i-quota. Ukuhlolwa okukhethekile nokuvunyelwa ngaphansi kwalesi sifo, amabhizinisi awazi ukuthi kufanele amemezele kanjani nokuthi yini ayidingayo. Ngakho-ke sithumela "izinsizakalo ezintathu" ekhaya kuze kube sekupheleni. Ukuqinisekisa ukuthi amabhizinisi akhethiwe abika kuhulumeni wasekhaya nasedolobheni ngesikhathi sangempela, bese ebika kuhulumeni wasekhaya nakwidolobha ngesikhathi sangempela
Lapho abantu bethatha izinkuni, ilangabi liphezulu
Umshini wokufaka uphawu lomoya oshisayo okhiqizwe nguMax
Kusukela ngoFebhuwari, okukhishwa nyangazonke kungamasethi ama-5
NgoMashi, okukhishwa nyangazonke kungamaqoqo angama-20
Ngo-Ephreli, okukhishwa nyangazonke kwakungamasethi angama-900
Ngomeyi, kulindeleke ukuthi ikhiqize amasethi ayi-1500 ngenyanga